Alexa ၏ထိပ်တန်း 100,000 ဆိုက်များသို့ချိုးဖောက်ခြင်း Martech Zone
Alexa ၏ထိပ်တန်း 100,000 ဆိုက်များသို့ချိုးဖောက်
ခြောက်လကြိုးစားအလုပ်လုပ်ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ငါစစ်ဆေးခဲ့တယ် Alexa နှင့် 100,000 အမှတ်အသား (3 လပျမ်းမျှအား) ကျိုးပဲ့ပါပြီ။
ငါခန့်မှန်းမယ်ဆိုရင်ငါနောက်ဆုံးခြောက်လငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတစ်ပတ်ကိုနာရီ ၁၀ မှ ၂၀ လောက်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ငါတကယ်နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီသံရိုက်ရန်မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်ငါ 10 ရက်အပိုနှင့်အတူအဆင်ပြေတယ်
ငါဘာလို့ဒါကိုမျှဝေနေတာလဲ တခြားအရာတွေလိုပဲကိုယ့်အတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေချမှတ်တာဟာကောင်းပါတယ်။ Alexa သည်အင်တာနက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အနီးဆုံးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ရက်သည်အခြားသူများနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်။ Technorati ကကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်သူတစ်ပါးအားမည်သို့ပြုမူနေသည်ကိုပေးသည် ကျွန်ုပ်သည် ၁၂၀၀၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီးနှစ်ကုန်တွင်ထိပ်တန်းဘလော့ဂ် ၅၀၀၀ ကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါဘာတွေကွဲပြားခြားနားလုပ်နေတာလဲ ငါဒီဇိုင်းပုံစံစုံစုံ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အချို့၊ ကျွန်ုပ်၏တင်းပလိတ်များကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ အခြားဘလော့ဂ်များတွင်မှတ်ချက်ပေးခြင်းများ၊ trackbacks များစွာကိုပြုလုပ်ပြီးပါပြီ။ သို့သော်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့တွင်ဖြစ်သင့်သောအရာကိုကျွန်ုပ်၏အမြင်နှင့်မှန်ကန်စွာနေထိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည် လုပ်နေတာ ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အလိုအလျောက်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဝေမျှချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းစဉ်များသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ တခါတရံကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကို (ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်သိသည်) ပရိုဂရမ်းမင်း (ခေတ်သစ်စျေးကွက်၏ဘဝကဏ္ life ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း - တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်။ သော်လည်းကောင်း) ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏အာရုံစိုက်မှုအခြေအနေမည်သို့ပြောင်းလဲနေသည်၊ ဘယ်လိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုတကယ်ကူညီသလဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့အခါအားလျော်စွာ rants ။
၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပုံရသဖြင့်သင်နှစ်သက်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားခေါင်းစဉ်များရှိရင်ငါ့ကိုပြောပြပေးပါ ဦး ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းမင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်ပြောသွားမှာပါ။
Beginner ၏လမ်းညွှန်ချက်များ SQL Injection နှင့် Cross-Site Scripting
WordPress - ဆိုဒ်တိုင်းရှိ # 1 ပလပ်အင်ရှိရမည်
3:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 19
ရှင်းနေသည်မှာ Sean … Alexa သည်သင်စောင့်ဆိုင်းလေလေ ပို၍ တိကျမှန်ကန်ပုံရသည်။ Alexa သည်လက်လှမ်းမှီမှုကိုခန့်မှန်းရန် 'ကျပန်း' နမူနာတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဲဒါဟာပိုပြီးတိကျတယ်။ ဒါကကျွန်မရေရှည်အာရုံစိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ သုံးလတာက 'ဒီနေ့' ထက်ငါ့ရဲ့ပန်းတိုင်ပါ။ သင်၏ဆိုဒ်နှင့်သင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းငါနေ့တိုင်းအတော်အတန်မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်းအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအရေးကြီးသည်။
Wow နှင့် Uh Oh တို့သည်ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်ခဲ့သည့်အတိအကျဖြစ်သည်။ ငါဘလော့ဂ်မှာကြိုးစားအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါနောက်ဆုံးကြည့်ချင်တာကငါကစာရင်းပေးသွင်းထားသူတွေကိုသိမ်းဆည်းမယ့်အစား၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အခြားသူတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏ဘလော့ဂ်များတွင်ကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးသောကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောညွှန်ပြချက်လည်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လက်လှမ်းမမီနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့နားထောင်သင့်သည်ကိုမသေချာပါ။ ၎င်းသည်ထိပ်ဆုံး ၁၀ တွင်မပါဝင်သည့် SEO ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်အလွန်တူသည်။
ဇန်နဝါရီ 4, 2007 မှာ 6: 06 AM
ဂုဏ်ယူပါတယ် Doug! buddy ကြီးစွာသောပို့စ်များကိုတက်ထားပါ
6:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 56
ဂုဏ်ယူပါတယ် Doug! သငျသညျ hardwork ချေကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ spam များကိုတိုက်ခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးသောကျွန်ုပ်တို့သည် Neo need လိုအပ်သည်။ ဘလော့၏ပြန်လည်ရှင်သန်မှုနှင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များအတွက်မျှော်လင့်နေပါသည်။
10:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 32
ဂုဏ်ယူပါတယ်! ကျွန်ုပ်၏ရုံးခန်း၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်သည် SEO ကိုကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကိုသတိပြုမိစေရန်ဖတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း Alexa မှာတက်နေခဲ့ကြပေမယ့် ၁၀၀K ၃ လကြာအမှတ်အသားကိုမချိုးဖောက်သေးဘူး။ ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာငါအတိအကျသိတယ်။
MSCO မှ Chris Kieff
“ သင်၏စျေးကွက်အောင်မြင်မှု” ၏စာရေးသူ Mark Stevens မှရေးသားခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီ 11, 2007 မှာ 8: 52 AM
ဇန်နဝါရီ 13, 2007 မှာ 1: 20 AM
မတ်လ 19, 2007 မှာ 10: 46 AM
Alexa ရလဒ်တွေက site / traffic ပိုကြီးလေလေလို့ထင်ပါတယ်။ သေးငယ်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့်လူများသည် tool bar ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်တစ်ခြားသူများ၏ site များသို့လူများစွာကိုခေါ်ယူခြင်းဖြင့်မှားယွင်းသောရလဒ်များကိုအားပေးနိုင်သည် (ဤဆိုဒ်များမှမကြာသေးမီကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကမည်မျှအသုံးဝင်သောနှင့်တုံ့ပြန်ချက်အားဖြင့် site ကိုအောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာ။ ကျွန်ုပ်အတွက်တွက်ချက်ရန်နည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်၏ဆာဗာ၏ဝက်ဘ်မှတ်တမ်းများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်တိုးပွားလာသောလမ်းကြောင်းများပုံမှန်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
သြဂုတ် 9, 2008 မှာ 9: 42 AM
အကယ်၍ Alexa ကသင့်အားသင်၏အသွားအလာအကြောင်းပိုမိုတိကျမှန်ကန်စွာမှတ်တမ်းတင်စေလိုပါက toolbar ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတစ် ဦး ဦး အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲသင့် website ကိုအခါအားလျော်စွာ Alexa အားအသိပေးမည့် widget တစ်ခုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Andre Wilburn ပါ
မတ်လ 30, 2009 မှာ 12: 15 pm တွင်
ဂုဏ်ယူပါတယ်လူ! ကျွန်ုပ်၏ blog ကိုထိပ်ဆုံး ၁၀၀ တွင်ကောင်းစွာရရှိစေရန်သင်အကြံဥာဏ်အချို့ပေးနိုင်သည်။
မတ်လ 30, 2009 မှာ 3: 12 pm တွင်
ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းနှင့်အရှိန်အဟုန် = အောင်မြင်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်သည်ထိပ်ဆုံး ၅၀ တွင်တက်နေသည်
ဇွန် 30, 2009 မှာ 10: 22 pm တွင်
ယခုဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖြစ်၍ မင်းရဲ့ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်ရာထူးကိုငါမသိဘူး။ မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်နောက်ကျတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကမ်းလှမ်းပါရစေ။ ၆ လအတွင်း ၁၀၀,၀၀၀ အောက်၌အတော်လေးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Lates ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့် ၁ သန်းအောက်သာရှိသည်။ နှစ်တွေအကုန်မှာ ၁၀၀,၀၀၀ အောက်မှာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းနေပါတယ်။
7:2013 pm မှာဇွန် 9, 05
မင်္ဂလာပါ၊ ယခုကျွန်ုပ်၏ Alexa သည် 105k-110k အကြားရှိနေရာဖြစ်သည်။ တောင်ကုန်းကိုကျော်ပြီး ၁၀၀ ကီလိုမီတာအောက်၌ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်။ ဂရိတ် site နှင့်ပင်ပိုကောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကောင်းသောအလုပ်တက်ထားပါ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဇွန် 7, 2013 မှာ 1: 19 pm တွင်
3:2015 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 29 တွင်
site တစ်ခုမည်မျှကောင်းမွန်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင် Technorati အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်တန်ဖိုးထားဆဲဖြစ်သည်။
4:2015 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 37
မဟုတ်ပါ၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်အချိန်အတော်ကြာမစောင့်ခဲ့ပါဘူး။ ငါလူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုယနေ့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတစ် ဦး အကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးပိုရှိခြင်းကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။